Ɔhaw a Mmusua Refa Mu
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luvale Macedonian Malagasy Myanmar Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Mmusua pii refa ɔhaw mu, nanso afotusɛm pii wɔ Bible mu a ɛbɛtumi ama wɔagyina ano.
Wiase Nyinaa Akwahosan Ahyehyɛde no kyerɛ sɛ ɔbaa wo a, ɛfi hɔ ara kɔsi abosome nsia deɛ, ɛsɛ sɛ ɔma abofra no nufoɔ nko ara. Nanso wei nyinaa akyi no, UNICEF (Amanaman Nkabom Mmofra Ho Foto) panin a ɔhwɛ sɛ mmofra bɛnya nnuane pa adi wɔ Afrika apuei ne anafoɔ no ka sɛ nnipa bi da so ara redaadaa mmaatan sɛ “mmofra nnuane a wɔtɔn wɔ sotɔɔ no yɛ papa te sɛ nufosuo ara.”
NEA BIBLE KA: “Ogyimfoɔ gye nsɛm nyinaa di, na onitefoɔ hwɛ n’anammɔn yie.”—Mmebusɛm 14:15.
Nwomanimfo bi a wɔwɔ Montreal yɛɛ nhwehwɛmu bi, na wɔde too dwa sɛ mmofra a wɔn awofo yɛ kankabi a wɔhyɛ wɔn so katee no nyini bɛyɛ atɔtweatɔtwee sen mmofra a wɔn awofo dɔ wɔn na wɔde nteɛso a ɛfata ma wɔn.
WONIM? Ɛfi tete na Bible kyerɛɛ ɔkwan pa a ɛsɛ sɛ awofo fa so tete wɔn mma.—Kolosefoɔ 3:21.
Nhwehwɛmu a wɔyɛe wɔ mmusua bi mu daa no adi sɛ, sɛ awofo amma wɔn nnwuma antwitware wɔn mmusua asɛde mu a, wɔtumi ne wɔn mma bɔ yie. Nanso sɛ wɔamfa adwuma anto nea ɛda na wɔma ɛdidi ba abusua no dwumadi ahorow mu a, ɛka mmofra no. Sɛ awofo pɔn ba fie na wɔkɔ so frɛfrɛ adwumam a, wɔrennya bere nhwɛ wɔn mma.
SUSU HO: “Biribiara wɔ ne berɛ a wɔahyɛ ato hɔ.”—Ɔsɛnkafoɔ 3:1.
Sɛ wode Bible afotu yɛ adwuma a, w’aware bɛsɔ na wo ne w’abusua nso ani begye.